Zimbabwe - Concerns over the low pass rate achieved in the year 2020 - Opera News
A report has been shared over the concerns by different state holders over the low pass rate that was recorded by Zimbabwean schools under the 2020 academic year.
The 2020 academic year was full of challenges for the Zimbabwe's academic sector as schools bad to be shut much of the time because of the Covid-19 pandemic.
Zimbabwe recorded a lower pass rate for the ZIMSEC Grade 7 results. It was the lowest pass rate ever recorded in Zimbabwe in half a decade.The 2020 National pass rate decreased from 46.9 percent which was achieved in 2019 , to 37.11 percent which was achieved in 2020.
It is highlighted that this led to various stakeholders expressing gread concerns ober such a decrease in terms of the pass rates.There are concerns over the decrease of the pass rate going below the 50 percent.
The Minister of Primary and Secondary education Cain Mathema is reported to have highlighted that the decrease in the national pass rate was worsened by the Covid-19 pandemic in the sector that was already facing its own challenges, hence less teaching in schools.
Cain Mathema ZIMSEC Grade Zimbabwe
Wonders: See the tribe that worships cows and treat them as equals
The Ancient People Who Lived On Earth Before Us (See Photos)
Take a look at some of the most beautiful antelopes in the South African wild
Covid 19 latest updates in South Africa
An African who was taken to a zoo in America to be exhibited with monkeys